Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) - Hello Sayarwon
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း )
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကဘာလဲ။
မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းဟုခေါ်သောမျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်ခွံနှင့် မျက်လုံး၏အဖြူသား ကြားရှိ ပါးလွာကြည်လင်သောအမြှေးပါးရောင်ရမ်းသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးနီရဲခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းသည် မျက်လုံးတစ်ဖက် သို့မဟုတ် နှစ်ဖက်လုံးတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းသည် သက်တောင့်သက်တာမရှိဖြစ်စေကာအရုပ်ဆိုးစေသော်လည်းမျက်စိအမြင်ကိုထိခိုက်ခြင်းရှားပါသည်။ မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းသည် ရောဂါကူးစက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအခြားလူများသို့ မကူးစက်စေရန် အချိန်မီကုသသင့်ပါသည်။
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းသည် အလွန်အဖြစ် များသောမျက်စိရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးမသောက် ပါကပျောက်ကင်းမသွားပါ။ မည်သူမဆိုမျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆောင်းဦးရာသီတွင် ပို၍ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါကမျက်လုံး၏ အဖြူသားများသည် မျက်ခွံအတွင်းသားသွေးကြောများရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် နီရဲလာပါသည်။ ဓါတ်မတည့်မှု ကြောင့် မျက်လုံးနီခြင်းတွင် သင်သည် ယားယံခြင်းကိုခံစားရမည်။ မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသောအရာများမှာဝတ်ဆံမှုန်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှ ဖောက်များ နှင့် အိမ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါကမျက်လုံးသည် ရောင်ရမ်းခြောက်ကပ်လာပြီးမျက်ရည်များစီးကျလာပါ မည်။ ဘတ်တီးရီယားကြောင့်ဖြစ်ပါကနာကျင်ခြင်း၊ယားယံခြင်း နှင့် မျက်လုံးတွင်းအနာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသောရောဂါလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးလိုသည်များရှိပါကဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသောရောဂါလက္ခဏာများရှိ ပြီးမျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါကဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်ပြသပါ။ မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းသည်ပထမဆုံးရောဂါလက္ခဏာစပေါ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်းအလွန်ကူးစက်ပျံ့ပွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မီကုသခြင်းသည် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေရုံသာမကသင်ချစ်ခင်သောသူများကိုလည်းမျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းမကူးစက်အောင် ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။
သင်သည် စိတ်အလိုရှိသလိုအိမ်တွင်ကုသခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးရုံသို့ နောက်ကျမှလာခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပို၍ပြင်းထန်ပြီးကုသရန်ခက်ခဲသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့် အခြားမျက်စိရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်၍ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပပစ္စည်းများမှကူးစက်ခံရခြင်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေသောရောဂါပိုးကူးစက်မှု။ ဥပမာ- staph Staphylococcus နှင့် Streptococcus
ဝတ်ဆံမှုန်၊ ဖုန်မှုန့်၊ တိရစ္ဆာန်အမွေးတို့နှင့် ဓါတ် မတည့်မှု
ငါ့ဆီမှာ Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် အခြားလူများအားကူးစက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန် မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအချက်များကိုသိသင့်ပါသည်။ အောက်ပါ အချက်များသည် မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေပါ သည်။
မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းရှိသူ၏ မျက်ရည်များ၊ လက်ချောင်း၊ လက်ကိုင်ပုဝါဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်း
မျက်ကပ်မှန်မကြခဏအသုံးပြုခြင်း။ အထူးသဖြင့် တစ်ပတ်ခံမျက်ကပ်မှန်များ ( မအိပ်ခင် ချွတ်စရာမလိုသော ၇ရက်ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သောမှန် အမျိုးအစားဖြစ်သည်)
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် မျက်လုံးနီရဲရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးနီရဲရောင်ခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ မျက်လုံးနီရဲရောင် ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကိုမသိပါကဆရာဝန်သည် မျက်လုံးနီရဲရောင်ခြင်းကိုဦးတည်စေသောတိကျသောအချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန် စစ်ဆေးမှု အချို့ကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
Conjunctivitis (မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းသည် ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပါကဆရာဝန်သည် မျက်စဉ်းနှင့် ပဋိဇီဝလိမ်းဆေးများကိုသုံးရန်ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဖောင်းနေသောအောက်မျက်ခွံကိုပူနွေးသောအဝတ်ဖြင့် ဖိပေးခြင်း ဖြင့် သက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောမျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းသည် ကုသမှုအပြီး ၄၈နာရီအတွင်း သက်သာလာနိုင်ပြီး ၁ပတ်အတွင်း ပျောက် ကင်းသွားနိုင်ပါသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းတွင် မျက်စဉ်း နှင့် လိမ်းဆေးတို့သည် အသုံးမဝင်ပါ။ မျက်စဉ်းသည် မျက် လုံးအစိုဓါတ် မြင့်စေရန် နှင့် နွေးသောအဝတ်ဖြင့် ဖိခြင်းသည် ရောင်ရမ်းခြင်းသက်သာရန် အတွက်သာတက်နိုင်ပါ သည်။ မျက်လုံးနီရဲရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ် သည် ၁-၂ ပတ်အတွင်းသက်သာလာပြီး ကြာရှည်စွာမဖြစ်ပွားပါ။
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါကဆရာဝန်သည် မျက်စဉ်း နှင့် အယားပျောက်ဆေးတို့ကိုရောင်ရမ်းခြင်းသက်သာစေရန်၊ နှာပိတ်ပျောက်ဆေးကိုဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများသက်သာစေရန်အတွက် ပေးပါလိမ့်မည်။ ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေရန် ရေခဲကပ်နိုင်ပါသည်။ မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောဓါတ်မတည့်ခြင်းများသည် ရာသီဥတုအလိုက် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းသည် မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသရာတွင် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
ကောင်းမွန်သောနေထိုင်မှုဘဝပုံစံသည် မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ် သည်။ သင်ရောဂါဖြစ်ပါကကောင်းသောအကျင့်များသေချာအောင်လုပ်ခြင်းသည် မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်းကိုလျင်မြန်စွာသက်သာစေပြီး ခန္ဓါကိုယ်သို့ မကူးစက်စေပါ။ အောက်ပါတို့ကိုမှတ်သားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်းရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
မျက်စိနီရဲရောင်ခြင်း ဖြစ်ပါကမည်သူနှင့်မျှ တိုက် ရိုက်ထိတွေ့မှု မပြုပါနှင့်။
အခြားမိသားစုဝင်များနှင့် သီးခြားမျက်နှာသုတ် ပုဝါ၊ ကိုယ်သုတ်အဝတ်၊ ခေါင်းအုံးအသုံးပြုပါ။
ဟောင်းနွမ်းသွားသောမျက်လုံးအလှကုန် ပစ္စည်းများကိုမသုံးမပြုပါနှင့်။ အခြားသူများနှင့်လည်းမျက်လုံးအလှကုန် ပစ္စည်းများ မျှဝေမသုံးစွဲပါနှင့်။
ရောင်သောနေရာကိုမထိပါနှင့်။ မျက်လုံးကိုမပွတ် ပါနှင့်
ကုသမှုမပြီးဆုံးမချင်းမျက်ကပ်မှန် မတပ်ဆင် ပါနှင့်။ မျက်ကပ်မှန်ကိုအစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင် ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါကသင့်အတွက် သင့်တော်သောအဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 20, 2017
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient
Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012.
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., &
Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health
handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Trang 1437, 1440Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient
handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Trang 1437, 1440
ဒါတွေကြောင့် ကြို့ထိုးရတာပါ။ ။
ခြေဖဝါးမှာ ပူသလို ဘာလို့ခံစားရတာလဲ